परमेश्वरमा सबै कुरा सम्भव : NepalChurch.com
कति कुरा हाम्रो लागि हाम्रो दृष्टिकोणमा असम्भव हुन्छन् । हामीले आप्mनो कोशिस र प्रयत्नहरुबाट कति कुरा सम्भव नभएकोले पनि जीवनमा हार खान्छौं । कति कुरा यस्ता छन् जो हाम्रो लागि असम्भव जस्तो लाग्छ । त्यसै कारण कति मानिस निराशमा जिउँछन् । कति मानिस हतोत्साहित बन्दछन् । आशा सबै गुमाई पठाउँदछन् । तर येशूमा हरेक मानिसहरुको लागि खुशीको सन्देश छ । येशूमा हरेक मानिसहरुको लागि महान आशा छ । किनकि परमेश्वरमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन भनेर यहाँ बताइएको छ ।
“येशूले तिनीहरुमाथि दृष्टि लगाई भन्नुभयो, ‘मानिसहरुको लागि यो असम्भव छ, तर परमेश्वरको लागि सबै कुरा सम्भव छ ।” मत्ती १९:२६ ।
येशूले चेलाहरुलाई परमेश्वरमा सबै कुरा सम्भव छ भनेर जोड दिनु भएको कुरा थाहा गर्न सक्दछौं । यहाँ एक जना धनी युवकले येशूलाई अनन्त जीवन पाउन मैले के गर्नु पर्छ भनेर भन्दा उनीसँग भएका कुराहरु बेचेर गरीबलाई दिनु भनेर भनिएको थियो । उसले व्यवस्थाको सबै कुरा एक एक पालन गरेको कुरा पनि बताईरहेको थियो । पछि त्यो युवक येशूले भनेका कुरा मान्न तयार थिएन । किनकि उ यति धनी थियो कि उसले त्यही कुराचाहिं जीवनको महतवपूर्ण कुरा ठानीरहेको थियो । धनीहरुलाई स्वर्गको राज्यमा छिर्नु भन्दा त उँठलाई सियोको नाथ्रीबाट छिर्न सजिलो हुन्छ भनेर येशूले भन्नुहुँदा चेलाहरु छक्क परीरहेका थिए । अचम्म मानीरहेका थिए । कसले उद्धार पाउन सक्छद्ध त? कसले मुक्ति पाउन सक्छ त? धन सम्पत्तिलाई प्रेम गर्ने, प्रभुलाई पहिलो स्थान नदिने, लोभी, पापले भरिएको मानिस परमेश्वरको राज्यमा छिर्नु भन्दा त उँठलाई सियोको नाथ्रीबाट छिर्नु सजिलो हुन्छ भन्दा चेलाहरु आश्चार्यचकित बनीरहेका थिए । सबै मानिस पापी छन्, सबै मानिस मुखबाट नराम्रा बोल्छन्, सबै मानिस कुनै न कुनै रीतिले पाप गर्दछन् । लोभ गर्दछन् । धन सम्पत्तिमा भरोसा राखेर परमेश्वरमा भरोसा राख्दैनन । भौतिक र संसारिक कुरामा मानिसले आफूलाई लिप्त बनाउँदछन् । यस्तो अवस्थामा मानिसले यदि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैनन भने यदि मुक्ति पाउने त संसारमा कोही पनि छैनन कि? चेलाहरु स्वयं कति अवस्थामा सिद्ध थिएनन् । उनीहरु आफै पनि पापी मानिस नै थिए । उनीहरु आश्चार्यचकित बने । यसकारण पनि येशूले तिनीहरुलाई हेर्नुभयो । परमेश्वरमा सब कुरा सम्भव हुने कुरा चेलाहरुलाई उहाँले बताउनुभयो । चेलाहरुले आश्चर्यचकित मानेर विचार गरीरहेको अवस्थामा यो कस्तो कुरा हो ? भन्ने कुराले गर्दा चेलाहरुमा प्रश्नंहरु उठीरहेकै समयमा येशूले तिनीहरुतिर दृष्टि लगाउनु भयो ।
“येशूले तिनीहरुमाथि दृष्टि लगाई भन्नुभयो,
यहाँ येशूले तिनीहरुलाई दृष्टि लगाई भन्नुभयो भनेर मत्तीले भनेका छन् । यो घटनालाई मत्ती, मर्कूस र लूका तीनै जनाले सुसमाचारका पुस्तकहरुमा उल्लेख गरेका छन् । चेलाहरुमा एक प्रकारको आश्चार्यभावमा प्रश्नंहरु उठाईरहेका थिए । एक प्रकारले आशाविहिन, उत्तरविहिन अवस्था जस्तो चेलाहरुले महसूस गरीरहेका थिए । यस्तो अवस्थामा येशूले तिनीहरुलाई आफ्नो दृष्टि लगाउनुभयो । उहाँ आफ्ना आँखा तिनीहरुमाथि लगाउनु भयो । परमेश्वर यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले तपाईंप्रति उहाँको दृष्टि लगाई राख्नुहुन्छ । कतिचोटी मलाई कसैले हेर्दैन । मलाई कसैले देख्दैन । मैले गरेको कुरा मैले विचार गरेको कुरा अनि मै सोंचेको कुरा कसैले देख्दैन । शायद कति जनाले भन्दछन् म एक्लो छु । मेरो वास्ता गने अनि मेरो प्रश्नं.को उत्तर दिने कोही पनि छैन । मलाई माया गर्ने अनि मलाई वास्ता गर्ने कोही पनि छैन भनेर मानिसहरु जीवनमा आफैलाई धिक्कार सम्झीरहेका हुन्छन् । तर यहाँ येशूले चेलाहरुलाई दृष्टि लगाएर हेर्नुभयो । उहाँले तिनीहरुको मनको कुरा बुझनुभयो । तिनीहरुको सोंचाई र बिचारलाई देख्नुभयो । निश्चय पनि परमेश्वरले हाम्रा अन्तरस्करणका कुराहरु देख्नुहुन्छ । उहाँले हाम्रो हृदयका कुरा मनका कुरा अनि हाम्रो सोंच विचार सबै थाहा गर्नुहुन्छ । उहाँको दृष्टि हामीमाथि रहीरहन्छ । “किनकि जसको हृदय उहाँप्रति भक्त छन्, तिनीहरुलाई सहायता दिन सारा पृथ्वीभरी नै परमप्रभुको दृष्टि रहीरहन्छ …।” २ इतिहास १६:९ । निश्चय पनि २ इतिहासको यो पदले यही भन्दछ कि जसको हृदय परमेश्वरप्रति भक्त छन्, जसले परमेश्वरको भय मान्छन् । जसले परमेश्वरको खोजी गर्दछन् । जसले परमेश्वरको धार्मिकतामा जिउँदछन् । जो परमेश्वरको वचन र आज्ञामा जिउँदछन् । पापबाट अलग हुँदछन् । सिद्धता र पवित्रतामा जिउँदछन् । त्यस्ता मानिसहरुलाई सहायता दिन सारा पृथ्वीभरी नै परमेश्वरको दृष्टि रहीरहन्छ भनेर भनिएको छ । परमेश्वरले उहाँका जनहरुमाथि आफ्नो दृष्टि लगाई रहनुहुन्छ । पृथ्वीभरी नै उहाँको दृष्टि रहीरहन्छ । तपाईं जहाँ भए तापनि परमेश्वरको दृष्टि तपाईंमाथि रहीरहन्छ ।
‘मानिसहरुको लागि यो असम्भव छ,
यहाँ येशूले चेलाहरुलाई भन्नुभयो कि मानिसहरुको लागि त यो असम्भव छ । चेलाहरुले मनमा यस्ता असजिला अनि अनुत्तरित शंकालु प्रकारका विचारमा ग्रसित भएका थिए । हो पनि कतिचोटी हामी मानव जातिमा सबै कुराहरु सम्भव हुन्छ भन्ने छैन । मानिसमा असमभव हुने कुराहरु प्रशस्तै हुन्छन् । यहाँ धनी युवक जो येशूकहाँ आएका थिए, उनले येशूबाट आफ्नो जीवनमा केही उत्तर खोजीरहेको अवस्था थियो । उनी धनी भएकोले सारा उनका भरोसा अनि भर पर्ने कुराचाहिं उसँग भएको धनमै थियो । मानिसको जीवनमा छनौट गर्नुपर्ने कुरा हुन्छन्, तर सही कुरा छान्ने कि नछान्ने भन्ने कुराको चुनौती हरेक मानिस र विश्वासीहरुको जीवनमा रहीरहेको हुन्छ । किन मानिसहरुको लागि किन कति कुरा असम्भव लाग्दछन्? किन कति कुरा असम्भव देखिन्छन्? किनकि मानिस परमेश्वरमा भर नपरेर परमेश्वरको शक्तिमा विश्वास नगरेर परमेश्वरको महान कामको कुरालाई अबमूल्यन गरेर यस्ता असम्भव कुराहरुको पिंडामा जेलीरहन्छन् । आत्मिक कुराको साटो अनात्मिक कुरामा ध्यान दिएर अनि परमेश्वरको कुराको साटो संसारिक कुरामा ध्यान दिएर पनि कति कुरा असफलता र असम्भवका श्रृंखलाहरुमा संघर्ष गरीरहेका हुन्छन् । हामी आत्मिक तवरले परमेश्वरको कार्यहरु र शक्तिमा विश्वास गर्नु जरुरी हुन्छ । हामीले हामीसँग भएको भौतिक थोक, हाम्रो पद, हाम्रो योग्यता र शक्तिमा भर पर्ने होईन । कति कुरा तपाईंको जीवनमा भएका धन सम्पत्ति र भौतिक थोकले पूरा हुन सक्दैन । यहाँ धनी युवकको सम्बन्धमा कुरा गर्दा उनको जीवनमा उसँग भएको धन दौलत र उससग भएको भौतिक थोकहरुले उनलाई सन्तुष्टि दिन सकेको थिएन । आज तपाईं पनि परमेश्वरबाट टाडो भएर, परमेश्वरको शक्ति र योग्यताबाट टाढो भएर जीवनदेखि हार खानु भएको छ । असफलता र समस्या, असन्तुष्टि विभिन्न अनुत्तरित प्रश्नं.हरु लिएर हिंड्नु भएको छ होला । तपाईंको दृष्टि परमेश्वरको शक्तिमा लगाउनु पर्दछ । तपाईंको विश्वास र भरोसा परमप्रभुमा हुनु जरुरी हुन्छ । जब मानिस घमण्ड गर्छ , तुजुक गर्छ । यो धनी युवक उसको धनमा, उसको बलमा विश्वास गथ्र्यो । परमेश्वरमा भरोेसा राख्न सक्दैनथ्यो । आज यस्ता धेरै मानिसहरु उनीहरुको धन दौलतमा, उनीहरुको वलमा, उनीहरुको भएका चीजहरुमा भरोसा विश्वास गर्दछन् । परमेश्वरमा विश्वास गर्दैनन् । सबै कुरा गरेर केही नभएपछि अन्तिममा येशूमा आएर विश्वास गर्ने मानिस धेरै हुन्छन् मण्डलीमा । जीवनको अन्तिम अवस्थामा, जीवनको अन्तिम मोडमा अनि जीवनको कठिन घडीमा जो उनीहरुको धन सम्पतिले पनि गर्न सक्दैन । समाधान निस्कन सक्दैन । निको हुन सक्दैन । आशा र शान्ति प्रांप्त गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा येशूलाई चिनेर निको हुने, छुटकारा हुने मानिसहरु कति छन् कति । निश्चय मानिसले आफ्नो कोशिसमा असम्भव हुने कुरा कति छन् कति । यसको फेहेरिस्त लगाएर साध्य छैन । तर मानिसमा असम्भव हुने कुरा सबै परमेश्वरमा सम्भव छ ।
परमेश्वरको लागि सबै कुरा सम्भव छ ।
हाम्रा लागि जीवनमा कति कुरा असम्भव हुन्छन् । तर परमेश्वरको लागि कुनै कुरा कठिन छैन । कुनै कुरा गा¥हो छैन । कुनै कुरा असम्भव छैन । उहाँको लागि सबै कुरा सम्भव छ । मानिसहरुको लागि कति कुरा असम्भव छन् । तर परमेश्वरको निम्ति त त्यस्तो कुनै कुरा असम्भव छैन । शायद तपाईंले कति कुरा शुरु गर्नु भएको छ । तर पूरा गर्न सक्नु भएको छैन । कति कुरा छन् जो तपाईंको निम्ति कुनै एउटा कठिन पहाड चड्नु जस्तै एकदमै म त सक्दिन भन्ने मनमा लागीरहेको छ । जीवनमा हरेस खानु भएको छ । कति यस्ता समस्याहरु छन् होला जुन तपाईंको लागि एकदमै गा¥हो भएको होला । कति जनाको विभिन्न रोग विमार जो निको हुँदैन भनेर भनिएका छन् । मैले केही गर्न सक्दिन । तर आज यहाँ हरेक जना प्रभुका जनहरुले यो कुरा बुझन आवश्यक छ कि परमेश्वरको निम्ति कुनै पनि कुरा असम्भव छैन । परमेश्वरको निम्ति कुनै पनि कुरा कठिनाई छैन । किनकि मानिसहरुमा असम्भव छ । कठिनाई छ । त्यहाँ परमेश्वरमा सबै कुराको सम्भव छ ।
इस्राएलीहरु मिश्र देशबाट बनधनबाट छुटकारा पाएर प्रतिज्ञाको देशमा गईरहेको बेला त्यहाँ उनीहरुको लागि लाल समुद्रमा पुग्दा उनीहरुको लागि ठूलो आपत आईपरेको थियो । पछाडिबाट मिश्री सेनाहरुबाट खेदिएका थिए । अगाडि लाल समुद्रले घेरिएका थिए । उनीहरुले आफ्नो शक्ति र योग्यता र बलबाट केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन । लगभग उनीहरुले आफ्नो आशा र भरोसा सबै गुमाएका थिए । ६ लाख भन्दा बढी इस्राएलीहरुले यो अवस्थामा मोशामाथि गनगन गर्न शुरु गरेका थिए । मोशाको निम्ति ठूलै चुनौती आई परेको थियो । उनले आफ्ना ससुरो यित्रोको भेडाहरु गोठला गरेको, भेडाहरुलाई बाटो डोराएको तर यतिका धेरै मानिस कहिल्यै डोराएका थिएनन् । जति चारखुट्टे भेडा अगुवाई गर्न सजिलो हुन्छ त्यति दुईखुट्टे मानिस गोठाला गर्न र अगुवाई गर्न सजलो हुदैन । भेडाहरु त एक हुल बाँधेर हिंडथे । जता लग्यो उत्तै जान्थे ।
चालिस बर्ष मिद्यानमा उनले आफ्ना ससुरोको भेडा चराएको अनुभवले पनि यहाँ काम गरेको देखिन्न । सबै मानिसलाई एउटै मनमा ल्याउन, प्रभुतिर आँखा लगाउनलाई प्रेरित गर्न, सबैलाई मिलाएर अगुवाई गर्न एकदम चुनौतीपूर्ण कार्य थियो । एउटा सानो परिवारलाई त मिलाएर अगुवाई गर्न कति चुनौती हुन्छ भने मोशाले छ लाख मानिसहरुलाई अगुवाई गरी राखेका थिए । त्यसमाथि लाल समुद्र अगाडि छेकिएको अनि पछाडि मिश्रीहरुका सेनाहरुले खेदिएको थिए । उनीहरुका लागि कुनै सम्भवाना देखिएको थिएन । जब मोशा यस सबै समस्या, कठिनाई, असम्भव कुराहरुलाई लिएर परमेश्वरमा पुकारा गरे । परमेश्वरमा भरोसा गरे । परमेश्वरमा विश्वास गरे । त्यहाँ मानवले गर्न नसक्ने असम्भव कुरा परमेश्वरमा सम्भव भयो । लाल समुद्र दुई भागमा विभाजन भयो । सारा इस्राएलीहरु समुद्र पार तरेर गए । मिश्रीहरुका सेनाहरु समुद्रमा डुबेर मरे । कुनै पनि कुरा परमेश्वरको निम्ति असम्भव छैन । कुनै पनि कुरा परमेश्वरको निम्ति कठिनाई छैन । तपाईंसँग पनि यस्तै प्रश्नंहरु छन् । जुन तपाईंको जीवनमा लाल समुद्र जसरी खडा भएका छन् । मिश्री सेनाहरुले जस्तो तपाईंलाई खेदी रहेका छन् । नडराउनुस् । हतास नबन्नुस् । किनकि परमेश्वरमा आँखा लगाउनुहोस् । उहाँमा विश्वास र भरोसा गर्नुहोस् । उहाँमा हामी भएका कठिनाई र असम्भव कुरा सबै सम्भव हुन्छन् । हामीले हाम्रो आशा र विश्वास कदापि हराउनु हुँदैन ।
आज तपाईंको जीवनमा कठिन घडीमा गुज्रिनु भएको होला । मेरो रोग निको हुँदैन भनेर डाक्टरले भनेको छ भनेर भन्नु होला । मैले यो काम गर्न सक्दिन । मेरो निम्ति असम्भव छ भनेर भन्नु होला । मेरो निम्ति त अब आश छैन भनेर जीवनमा सबै आशा र उतसाह गुमाउनु भएको होला । के परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा कठिन छ र ? बाइबलले भन्दछ, “किनकि परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन ।” लूका १:३७ । निश्चय पनि तपाईंको जीवनमा आशा ल्याउने, मुक्ति दिने, शान्ति दिने परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ ।
पानीलाई दाखमद्यमा परिवर्तन गर्ने, आँधी हुरीलाई शान्त पार्ने, हर प्रकारको रोग र बिमारका समस्यामा गुज्रिएका मानिस सबैलाई निको पार्ने, सबै पापी मानिसको पाप क्षमा दिने, सबै मानिसलाई शान्ति, जीवन र आशा दिने परमेश्वर उहाँमा कुनै कुरा असम्भव छैन । के आज उहाँमा भरोसा र विश्वास राख्नुभएको छ? उहाँ तपाईंको निम्ति छुटकारा दिन, स्वतन्त्र दिन, विजय दिनलाई सदैव तयार हुनुहुन्छ । उहाँ पर्खीरहनु भएको छ । उहाँ तपाईंको भूल गल्ती, पाप, दोषी भावना सबै मेटाएर नयाँ कुरा शुरु गर्न चाहनु हुन्छ । तपाईंलाई चंगाई दिएर पूर्ण रूपमा उहाँको महिमामा डोराउन चाहनुहुन्छ । किन निराशा भएर बस्नु हुन्छ? किन आशा हराएर हिंड्नु हुन्छ? मेरो जीवनमा कुनै भविष्य छैन भनेर किन अँध्यारो मन लगाएर बाँच्नु हुन्छ? आउनुहोस्, परमेश्वरमा सबै कुरा सम्भव छ । उहाँमा कुनै कुरा कठिन छैन । उहाँले तपाईको जीवनमा नयाँ, आशा र भविष्य दिनु हुन्छ । उहाँको अलौकिक मार्गमा डोराउनु हुन्छ ।
« क्रुसिफाइड कवितासंग्रह विमोचन
India’s Modi breaks silence on protecting minorities, but urged to ‘walk the talk’ »